I-2010 ilifa - ii-Geofumadas
NgoDisemba, 2010 Internet kunye neBlogs, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Oko kuthetha, xa ndiyure leeyure ukuhamba ukuya eholidini, ndikhulula oko umoya wawuthatyathele kwaye i-dida ibambelele ngenxa yokuba igoli legolide alivumelekanga. Nangona ndandithandaza ngezinyembezi.
Ewe, akukho ziindaba ezininzi. Umele ukhangele kumaphepha okugqibela Iminyaka eyi-100 yedwa, kwaye baya kubona ukuba i-plottersters kunye nokubetha kubambelele kwisikripthi, abanye ngokugunyazwa, ezinye i-inertia, i-16 emva kokuhamba.
Kodwa ke, kuMongameli uLobo wonke umntu uyamqonda -Casi- ngaphandle kwembalwa, kwaye ngokuqinisekileyo akakholelwa.
Abahlali base-Ecuador, ukuba bafuna ukubetha iCorrea, kufuneka banikwe isihlalo sokuqala kwiklasi. Ndiyicinga ukuba ngeentsuku ezimbalwa bafundiswa ukuba bangenise iipjjamas zebhanki.
Eyona nto ingcono uZelaya angayenza, vusa iqhinga lokuphula i-bipartisanship kunye nokubamba abantu ilungelo lokuthatha inxaxheba. Nangona umba uhamba ixesha elide, ityala lezentlalo liphakamileyo kwaye kukho nantoni na eminye iminqweno emva kwayo.
Unyaka ugqityiwe kwimifuno efanayo, oyishiya, ukuba ufike, ukuba awufi, ukuba andihambi. Isiskithi esithakazelisayo, ukuba ukuba siyikela ingqalelo siya kuphelisa kwaye siyakulibala ukuba kufuneka silwe namantombazane enomsebenzi onokubanceda.
Naluphi na ukuphela konyaka kunzima, imisebenzi kunye nemisebenzi iphela ngokuza ku-4.125. Kodwa kuye kwaba ngumnyaka ovuzayo, unyana wam waphumelela, intombazana ekhanyisa amehlo am, naye kwinkqubo efunde ukuqhuba; Kuyinto ehlekisayo ukuba ndikulindele ukuba ndilale phantsi ngelixa eqhuba, kodwa ingcinezelo yokungaqhubeki phakathi kwendlela kwaye ukwesaba iibhagi ezihamba ngeeteksi andivumele ukuba ndiphumle kwaye ezinye zibuyisele intlungu ephazamisayo emqolo wam.
Ugqirha wathi yikholamu -leminyaka-.
Kodwa ngeento zonke, ndenza iikhilomitha ezilikhulu elitsha, ezo zingenakwenziwa ngeenqwelo zendiza ndazenza nge-train, kwi-ticabus, kwi-trolleybus, nangenxa yebalandeli iingcinga Kwafuneka ndibize ngelinye ilanga ukuba ndilinde ngerhamncwa. Ekugqibeleni kukulungile ukuba uphilile kwaye ube nesimo esihle.
Ukusuka kwiingxaki zamazwe ngamazwe
Ngethamsanqa, u-Obama wathi sekuphelile, mhlawumbi siza kuba seminye iminyaka emibini. Umhlobo wam e-Houston uthi ngoku ba thengisa izindlu, ukuba nantoni na bayayibonga loo mntu ngumkhangeli wokunqoba uNobel kusengaphambili kwaye omnye ngowesithathu u krokra baphuma
Kwimeko nayiphi na into yayinomdla othakazelisayo esasifundiswa ukuwenza ukugcina. Iinkampani ezininzi zathatha ithuba lokuhlaziya imicimbi ababeyicingayo engqondweni iintsuku ezininzi ezedlule, ezinye zibe ngcono.
Enye inkathazo sele isele eMpuma Ekude. Andikho nto ngokuchasene neengxowa-mali, ndiyazi ukuba akukho nto ilungileyo kunokulwa ekulweni okuhle, ukukhuphisana nokubona iziphumo zaloo nto. Kodwa kulungile ukuba ezinye iingcambu zithatha isigqibo xa uqoqosho lwehlabathi luya kuwa, oko kuphela Twit iinkampani ezingamashumi amane ezikuloo dolophu enkulu, ziyeke i-40,000 abantu abangasebenzi kwaye kuze kube yile minyaka ye-3 ingaboniswa ukuba isiqingatha sabo sasihamba ngokungekho mthethweni kumntla -okanye eSpain-.
Ubuchwepheshe beCAD / GIS
Eyona nto ilungileyo, ukujonga AutoDesk kwi-Mac. Akunjalo kuba ndiza kuthenga uMoya (andisweleka) kodwa ngenxa yendlela yokumakishaza abantu abathathu ukuba babuke emva kwimeko ye-CAD.
Kubonakala ngathi umzuzu we-Apple uza, i-4 ye-10 elektroniki ekhethiweyo ngamaxesha njengoko ukuchazwa kwe-2010 kumhlophe. Into efunekayo i-Apple yinto engabizi, kwaye oko oko kuyimfuneko kukuba imarike iya kufikelela apho, bonke baya kuvelisa zixhobo iyahambelana nemanzanita.
Nangona kwakukho ezinye izinto ezithandekayo kwihlabathi legadget yezemidlalo, abayikubeka umgangatho kwiimeko ze-geospatial. Ukuvula ubuchwepheshe bufuna ukuzinza, kulungile.
IiNethwekhi ziya kuhamba, amanethiwekhi ayisayi kuza. Iimpawu zoshishino ze-Facebook kunye ne-Twitter zibonakala zineqhekeza elincinci, okanye ubuncinci kakhulu kwiimeko zethu.
Ndandifuna ukubeka izimvo ezingaphezulu, kodwa ndiyathemba iholidi ukuba ndiyihlolisise izibikezelo zam zokugqibela kwiKrisimesi.
Eyona nto ibhetele, inceba yokuba kufuneka ndiyinqumle ukungena kwisigaba esitsha. I-2010 ibe ngumnyaka ovuzayo kakhulu kwimicimbi yobunzima. Nangona uye waba namaxesha ambi, ndivakalelwa kukuba kuya kugqitywa nge-flavour.
Usizi ukuba ungabi nomsebenzi kunye neqela lonke, kwaye ukubonga ngokuzinikela kwabo. Akukho ma-concertaciones, ukuvalwa, amabhunga, ixesha lokuphumla kubo bonke. Yiba nexesha elihle Don F!, Don W!, Don M!, P! n! o! m! m! nabo bonke abanye!
Post edlulileyo«Edlulileyo I-AutoCAD WS, eyona nto ibhetele kwi-AutoDesk kwiwebhu
Post Next IPad, 43 izicelo endizithandayoOkulandelayo "